မင်္ဂလာဒုံတပ်စွန့်မြေကိစ္စ လျော်ကြေးမပေးတော့ဘဲ မူလပိုင်ရှင်များကို ပြန်လည်ပေးအပ်သွားမည်ဟုဆ - Yangon Media Group
မင်္ဂလာဒုံတပ်စွန့်မြေကိစ္စ လျော်ကြေးမပေးတော့ဘဲ မူလပိုင်ရှင်များကို ပြန်လည်ပေးအပ်သွားမည်ဟုဆ
ရန်ကုန်၊အောက်တိုဘာ၂၄-မင်္ဂလာ ဒုံတပ်စွန့်မြေကိစ္စ ရန်ကုန်တိုင်းသည် အစိုးရကဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့မှ လျော်ကြေးမပေးတော့ဘဲ မူလပိုင် ရှင်များကိုပြန်လည်ပေးအပ်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က ဖွဲ့တာပေါ့ဗျာ။ သို့ သော် နောက်ဆုံးဘိတ်မှာ ဦး အောင်လှိုင်ဝင်း ပြောသွားတဲ့ အ တိုင်းပဲ။ နောက်ဆုံး ကျွန်တော်တို့ လုပ်လိုက်တာက လျော်ကြေးမပေး ပါနဲ့ ပြန်ပေးသင့်တယ်ဆိုတာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒါပါပဲ”ဟု ယင်းအဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ မြို့ပြနှင့်အိမ် ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြား ရေးမှူး ဦးထွန်းမြင့်အောင်က ဒီမို ကရေစီတူဒေးသို့ အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်ကပြောသည်။
ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် မင်္ဂလာဒုံ မြို့နယ်၊ စမ်းကြီးဝကွင်းအတွင်း ရှိတောင်သူများအား မြေယာ လျော်ကြေးပေးရမည်ဆိုပါက ပေး လျော်ရမည့် တောင်သူစာရင်းအား စိစစ်ရာတွင် မှန်ကန်စွာစိစစ်နိုင်ရေးအဖွဲ့မှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ လမ်းညွှန် ချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် မြေယာစီမံခန့် ခွဲမှုဌာနမှူး ဥက္ကဋ္ဌ ပြုလုပ်၍ ဖွဲ့ စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ¤င်းက ပြောသည်။
”လျော်ကြေးပေးရမယ့်လယ် သမားတွေအတွက် ဘယ်သူကို လျော်ကြေးပေးမှာလဲ ဆိုတာကို စုံစမ်းတဲ့အဖွဲ့ပါ။ သဘောကတော့ လယ်သမားလို့ပြောနေတဲ့သူတွေ ပိုင်ပါတယ်လို့ ပြောနေတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဗျာ၊ အဲ့ ဒါကြောင့် ဘယ်သူ့ကို ပိုင်ရှင်လို့ သတ်မှတ်မှာလဲ။ အဲဒါလုပ်တယ် ဗျာ။ နောက်တစ်ချက်က လျော် ကြေးပေးမယ်ဆိုလည်း ဘယ်လို နှုန်းတွေသတ်မှတ်သင့်သလဲ ဆို တာတင်ပြဖို့ အဖွဲ့ဖွဲ့လိုက်တယ်”ဟု ¤င်းကပြောသည်။
အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက် က တုိုင်း/ခရုိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး များနှင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေး ကော်မတီဝင်များက ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင် အထွေ ထွေအုပ်ချုပ်ရေး အဆောက်အ အုံတွင် အစည်းအဝေးခေါ်ယူခဲ့ ကြောင်း၊ အစည်းအဝေးတွင် လည်း တောင် သူလယ်သမားများကို လျော်ကြေးယူရန်ပြောဆိုခဲ့ပြီး လက်မှတ်ထိုးရန်လည်း ဖိအား ပေးမှုများလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း လယ်ယာမြေများကို အခြားနည်း လမ်းဖြင့် သုံးစွဲခွင့်မရှိဘဲ အခြား နည်းလမ်းဖြင့်သုံးစွဲမည်ဆိုပါက လည်း လယ်သမားက ၂ဝ ရာခိုင် နှုန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ က ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်း ပိုင်ဆိုင်သည်ဆုိုသော သဘောတူညီချက်ကို လက်ခံမှ ခွင့်ပြုမည်ဆိုသော စကားများပြော ကြားခဲ့ကြောင်း မင်္ဂလာဒုံပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦး အောင်လှိုင်ဝင်းက ပြောသည်။
နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ မြေစစ် မူဝါဒများနှင့်အညီ ရပ်ကွက်၊ မြို့ နယ်၊ ခရိုင်၊ တိုင်း၊ ဗဟို အဆင့်ဆင့် သောလယ်ယာမြေနှင့် အခြား မြေများ သိမ်းဆည်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီများ အား တရားဝင်ဖွဲ့စည်းဆောင် ရွက်၍မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ စမ်းကြီးဝကွင်းအတွက်မူလပိုင်ရှင်တောင် သူများကိုစိစစ်ခဲ့ပြီး တွေ့ရှိချက် အားတိုင်းဒေသကြီးအဆင့် လယ် /စစ်ကော်မတီသို့ တင်ပြခဲ့ပြီးလည်း ဖြစ်ကြောင်း ¤င်းကပြောသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဇနီး မြဝတီမြို့၌ကျင်းပသည့် သံဃမဟာပဝါရဏာပြုပွဲနှင့် ဆွမ်းဆန်စိ
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရှိ ပိတ်ထားသော ကေဆောင်စက်မှုဇုန်သို့ တောင်ကိုရီးယားစီးပွားရေးလုပ်င
မြန်မာပြည်မှာ အသက်ကို ငွေနဲ့ဆက် နေရသလား
မန္တလေးတွင် ဆိုင်ကယ်စီးလာသည့် ဇနီးမောင်နှံကို နေ့ခင်းကြောင်တောင် သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်၊ ဇနီးဖြ?
အာဇာနည်နေ့မှစပြီး ဝန်ကြီးများရုံးကို သုံးရက်တာ အခမဲ့ဝင်ခွင့်ပြုမည်
ဇာတ်လမ်းတွဲ အသစ်မှာ စတိုင်အသစ်နဲ့ မြင်ရဖို့ရှိနေတဲ့ မင်းသမီး ဂျောင်ဆိုမင်
ရခိုင်စစ်ရှောင်စခန်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဝန်ကြီးဌာန၏ ပြောကြားချက် မြေပြင်အနေအထားနှင့် ကွဲလွဲနေဟုဆို
တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်များကို ဆပ်ကပ်တွင် ပြသမှု တားမြစ်သောဥပဒေ ဗြိတိန်တွင် ပြဋ္ဌာန်းမည်
ဝန်ကြီးများရုံးတွင် အာဇာနည်နေ့အတွက် ပြင်ဆင်ထားမှုအခြေအနေများကို အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်များ၏ ??